Gerrard Oo Ku Weeraray Mario Balotelli Rigoodhihii Uu Henderson Ka Boobay
HomeWararka MaantaGerrard Oo Ku Weeraray Mario Balotelli Rigoodhihii Uu Henderson Ka Boobay
Steven Gerrard ayaa ku eedeeyey Mario Balotelli inaanu muujinin “qadarin” Jordan Henderson markii uu ka fara maroojiyey kubaddii rigoodhaha ahayd ee ay Liverpool kaga adkaatay Besiktas xallay.
Balotelli ayaa dhaliyey rigoodhahaas fiidnimadii Khamiistii kulankii horyaalka Europa League wareegiisa 32 ka kooxood ee u dambeeya ee ay garoonka Anfield is aragii hore ku guuleysteen 1-0.
Rigoodhahaas oo weeraryahanka reer Talyaani muran iyo isjiidad kadib ka xoogay kabtankii kooxda Henderson iyo Daniel Sturridge oo muranku ku saabsanaa cida laagaysa kubadaas.
Gerrard wuxuu yidhi: “Henderson ayaa kabtanka ahaa Balotellina wuxuu u muujiyey Jordan woxogaa ixtiraam daro ah.”
Laacibka khadka dhexe, oo imika dhaawac ku maqan ayaa falaqeeyenimo kula shaqaynayay Telefishanka ITV oo ciyaarta gudbinayay.
Gerrard ayaa tilmaamay in Balotelli uu u muuqday mid xaaladiisu ‘qasab iyo xoog’ ku dhisan tahay, kadib markii weeraryahanku kubada kala baxay gacanta Henderson, oo isaguna u soo qaatay inuu dhigto barta laga laago rigoodhayaasha.
Henderson oo kabtan u ahaa Liverpool ciyaartan Besiktas, maadaama uu Gerrard dhaawac ku maqnaa, wuxuu kabtanka fadhiyey xusay inuu Henderson xaq u lahaa inuu rigdoodhahaas u laago kooxda.
“Sharcigu waa sharci,” ayuu yidhi. “Waan hambelyeynayaa Mario, waayo wuu dhaliyey, laakiin maaha wax qurux badan in la arko ciyaaryahanada oo jaafaa jirqaya. Waxay ila tahay in Jordan u maamulay xaalada si aad u qurux badan.”
Tababaraha Liverpool, Brendan Rodgers ayaan cadaynin cida xaqa u lahayd ama ahayd qofka saxda ah ee kubadaas rigoodhaha ah laagi lahaa, kadib ciyaarta oo wax laga weydiiyey.
Sidee wax u dhaceen.?
Jordan Henderson ayaa ahaa kabtan ku simaha ciyaarta oo buuxiyey booskii uu ka dhaawacmay kabtanka rasmiga ah ee naadiga Steven Gerrard
Markii ciyaarta ay ka hadhsanayd 10 daqiiqo oo kali ahi, Ciyaaryahan Jordon Ibe ayaa lagu legday ama lagu xanaaqadeeyey diilinta ganaaxa iyadoo uu garsoore Szymon Marciniak isla markiiba ku abaal mariyey Rigoodhe.
Henderson ayaa kubadii soo qaatay wuxuuna ula soo dhaqaaqay si uu u dhigto goobta u astaysan in rigodhayaasha laga laago…
Laakiin Balotelli ayaa kubadii kala baxay gacanta Henderson halkaasna waxaa ka bilaabmay is afgaran waaga iyo muranka dhex maray weeraryahanka iyo laacibka khadka dhexe , waxaan isna soo gallay weeraryahan Daniel Sturridge. Henderson wuxuu u muuqday mid aad uga xumaaday arinta , waxaana kubadii xoog iyo qasab ku dhigtay oo laagay Super Mario…
Mario Balotelli wuuu dhaliyey kubadii , ciyaaryahanadii oo uu ku jiro Hendersona way hambalyeeyeen oo la dabaal degeen, wallow walli cadhadii sii muuqatay.
Henderson ayaa ciyaarta kadib sheegay inuu isagu isku waday oo doonayay inuu kubadaas laago.
“Laba kubadood oo kaliya ayaa la iga qabtay intii aan ciyaarayay”
…Balotelli wuxuu dhaliyey 26 rigoodhe oo kamid ah 28 rigoodhe oo uu isa soo kor taagay ka hor kan Khamiistii waxaanu ahaa mid go’aan ku gaadhay in cid aan isaga ahayni aanay laagaynin, isagaana salaxday kubadii oo dhaliyey…
Xidigii hore ee difaaca uga ciyaari jiray Liverpool ee Jamie Carragher ayaa isagu si weyn u taageeray go’aanka uu Mario Balotelli ku qaatay rigoodhaha.
Balotelli ayaa la dabaal deggay saaxiibadii oo uu ku jiro Henderson, oo isagu markaas wali sii xanaaqsanaa , laakiin ciyaaryahanka Talyaaniga ah ayaa dib u soo gundhiyey oo xabadka ku qabtay isagoo qoslaya.
“Wuxuu ahaa gool aad u qaali ah,” ayuu Henderson ku yidhi Telefishanka ITV.
“Anigaa doonayay inaan rigoodhaha laago, Mario wuxuu dareemayay kalsooni badan rigoodhayaal xasaasi ahna hore wuu u soo laagay. Mid kasta oo naga mid ahi inuu isagu dhaliyo ayuu doonayay. Aad baan ugu kalsoonaa laaga Mario, hore ayuu rigoodhayaal wakhti adag ah u soo maray waanu dhaliyaa.”
Balotelli ayaa isna ciyaarta kadib bogga uu ku leeyahay shabakada Instagram fariintan soo dhigay: “Waad ku mahadsan tahay hendo inaad ii ogolaatay inaan rigoodhaha inoo laago.. Sheekadaasi hadda way dhamaatay. Weynu guuleysanay taas ayayna ahayd hadafkeenu. Koox ayaynu nahay khaas ahaan waxaynu nahay Liverpool. Weynakaa saaxiibayaal.”
Ciyaarta kadib tababaraha ayaa la weydiiyey cida xaqa u lahayd inay rigoodhahaas laagto, Rodgers wuxuu kaga jawaabay: “Waxaanu kuu cadayn karaa inaanu ciyaarta ku adkaanay 1-0.
“Waxaa kooxda ii jooga tiro ciyaaryahano ah oo ku fiican laaga rigoodhayaasha, oo uu kamid yahay Jordan [Henderson] iyo Mario [Balotelli] iyo Rickie Lambert.
“Natiijadii ugu fiicnayd ayaanu helnay waxaanan isu diyaarinaynaa kulanka is araga labaad ee todobaadka dambe.”
Is araga labada kooxood ee horyaalka Europa League ayaa ka dhici doona garoonka Besiktas, Khamiista , 26 February.
Official: Didier Drogba Oo Ku Biiray Kooxda Reer Maraykan Ee Montreal
Chelsea Oo Soo Af-jartay Guul-darro La’aantii Tottenham Figta Horyaalkana U Baxday
CARABAO CUP- Round 4 Draws